फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - बाँदरका हातमा नरिवल
बाँदरका हातमा नरिवल काशीनाथ मिश्रित
नरिवल त आखिर नरिवल नै हो, चाहे त्यो बाँदरका हातमा होस् चाहे मान्छेका हातमा ! बाँदरका हातबाट फुत्त मान्छेका हातमा सर्ने बित्तिकै अनार बन्ने भए कुरा बेग्लै थियो । त्यसो त भैहाल्दैन । झन् मान्छेका हातमा भन्दा बाँदरका हातमा त्यो सुरक्षित रहन्छ । किनभने बाँदरले जति नङ्ग्याए पनि खाने ठाउँ पत्ता लगाउन सक्दैन । मान्छेले भने भेट्नासाथ खाइहाल्छ । कति असुरक्षित छ मान्छेका हातमा नरिवल ! त्यसैले त भनेका होलान् बुढाहरूले बाँदरका हातमा नरिवल । नत्र त मान्छेका हातमा नरिवल भन्थे होला ।
बाँदरका हातमा नरिवल भन्नु र नेताका हातमा सत्ता भन्नु कुरा एउटै हो । बाँदरले नरिवल नङ्ग्याएभन्दा बढ्ता नेताहरूले देश नङ्ग्याए तर खाइहाल्न भने सकेका छैनन् । राजाले खान थाल्यो भनेर हात लिएको देश स्यालले कुखुरो भुत्ल्याए झैं भुत्ल्याई सक्दा पनि अझै चित्त बुझेको छैन यिनीहरूलाई । राजाले बरु नरिवल भित्रको पानी मात्र खाएको थियो । यिनीहरूले त गुदी नै खान थालिसके । हैन साँच्चिकै बाँदर भएको भए त नरिवल कोट्याउन पनि नसक्नु पर्ने हो कतै नक्कली बाँदर त हैनन् ? लौ नै अब यिनीहरूलाई नरिवल दिएर सत्तामा बाँदरलाई पठाउनु पर्यो । कम से कम देश त जोगिन्थ्यो ।
बाँदरलाई सत्ता सुम्पने हो भने नेपालको धन हरियो वन त जोगिने थियो । बाँदरले आफ्नो घर नबनाएर कत्रो ठुलो त्याग गरेको छ ! मान्छेले सक्छ ? जङ्गलमै बसेर बाँदरलाई निर्वाह हुने, मान्छेलाई भने बाँदर उफ्रेर पनि पुग्न नसक्ने घर चाहिने ! अरु नसके पनि वन मन्त्रालय त बाँदरलाई नै दिनु पर्छ, नत्र वन कसरी जोगिन्छ ? अनि बाँदरको सहभागिताबिना समावेशी सरकार कसरी बन्छ ?
हालै तपाइँले एउटा तात्तातो समाचार सुन्नु भएको होला । मैले त सुनेको हुँ । बाँदरहरूले वन मन्त्रालय चहियो भनेर आन्दोलन गरेछन्् । हाम्रो वन सुरक्षित हुनु पर्या् भन्ने जाहेज माग पनि यो बहिरो सरकारले सुनेनछ । वन मन्त्रीकै राजीनामाको माग उठाएर पशुपतिमा धर्ना बसेछन् । यो सरकारले वन जोगाउन सकेन, हामी पहल गर्छौ, वन मन्त्रालय चाहियो भनेर एयरपोट घेराउ गर्ने कार्यक्रम समेत राखेछन् । कोही कोही त हवाइजहाजका पखेटामा झुण्डिएर समेत आन्दोलन गरेछन् । लाठीचार्जले मात्र नपुगेर गोली हान्नेसम्मको आदेश यो सरकारले दिएछ । बाँदरको जत्तिको पनि बुद्धि नहुनेले के सत्ता चलाउनु ? खुरुक्क बाँदरलाई सुम्पे हुन्छ कसैले केही भन्दैन । होइन भने हामी नै बाँदर हौं भन्ने घोषणा गरे हाम्रो चित्त बुझ्छ । पीर नरिवलको हो । नरिवल बाँदरकै हातमा हुनुपर्छ, मान्छेका हातमा पर्यो भने सिद्धिन पनि बेर लाग्दैन । राजाका हातबाट फुत्त नेताका हातमा सत्ता आउने वित्तिकै नरिवल अनार हुन्छ भन्ने भ्रम रहेछ । आखिर नरिवल बाँदरकै हातमा रहँदा ठीक, मान्छेका हातमा भन्दा ! हैन र ?